GỤỌ NKE Abbey Abkhaz Abui Acholi Afrikaans Albanian Altai Alur American Sign Language Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Assamese Attié Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Dairi) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Biak Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Bolivian Sign Language Boulou British Sign Language Bulgarian Bété Cambodian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chilean Sign Language Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuukese Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Cuban Sign Language Czech Damara Dangme Danish Dayak Ngaju Digor Drehu Dutch Ecuadorian Sign Language Edo Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Gokana Greek Greenlandic Guarani Guerze Gujarati Gun Guéré Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Huichol Hungarian Hungarian Sign Language Iban Ibanag Ibinda Igbo Iloko Indonesian Indonesian Sign Language Irish Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Jula Kabardin-Cherkess Kabiye Kabuverdianu Kabyle Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Konkani (Roman) Korean Korean Sign Language Kosraean Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Laotian Latvian Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mexican Sign Language Miskito Mixe Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nsenga Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Palauan Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Pidgin (Cameroon) Polish Polish Sign Language Ponapean Poqomchi' Portuguese Portuguese (European) Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Tena) Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Romania) Romany (Southern Greece) Rotuman Runyankore Russian Russian Sign Language Rutoro Samoan Sangir Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tiv Tlapanec Tojolabal Tongan Toraja Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Udmurt Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Venezuelan Sign Language Vezo Vietnamese Vietnamese Sign Language Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yacouba Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zimbabwe Sign Language Zulu
Ọ bụrụ na e keghị mmadụ eke, ọ pụtara na ndụ enweghị isi na ọdụ. Ọ bụrụ na e kere mmadụ eke, anyị ga-amatali azịza ajụjụ ndị na-echu anyị ụra banyere ndụ na ihe ga-eme n’ọdịnihu.
Chegodị banyere ihe atụ a: Alex amaghị ihe ọ ga-eme eme. O kweere kemgbe na Chineke dị nakwa na e kere mmadụ eke. Ma, taa, onye na-akụziri ha ihe ọmụmụ bayọlọji kụziiri ha na e keghị mmadụ eke, na ọ bụ ihe ndị ọkà mmụta sayensị chọpụtarala. Alex achọghị ka ndị ọzọ lee ya anya ka onye iberiibe. Ọ gwara onwe ya, sị: ‘A sị kwuwe, ọ bụrụ na ndị ọkà mmụta sayensị achọpụtala na e keghị mmadụ eke, ọ̀ bụzi mụnwa ga-arụwa ha ụka?’
Ọ bụrụ na ị bụ Alex, ị̀ ga-ekweta na e keghị mmadụ eke naanị n’ihi na e nwere akwụkwọ sayensị ndị kwuru na ọ bụ eziokwu?
Ọtụtụ mgbe, ọ na-adịrị ndị mmadụ mfe ikwu na ha kweere na e kere mmadụ eke ma ọ bụ na ha ekweghị. Ma ha amaghị ihe mere ha ji kwere ma ọ bụ ghara ikwere.
Ụfọdụ ndị kweere na e kere mmadụ eke naanị n’ihi na ọ bụ ihe a kụziiri ha na chọọchị.
Ụfọdụ ndị kweere na e keghị mmadụ eke naanị n’ihi na ọ bụ ihe a kụziiri ha n’ụlọ akwụkwọ.
AJỤJỤ ISII Ị GA-ECHEBARA ECHICHE
Baịbụl kwuru, sị: “Ụlọ ọ bụla nwere onye rụrụ ya, ma onye rụrụ ihe niile bụ Chineke.” (Ndị Hibru 3:4) Ihe a Baịbụl kwuru ọ̀ dabara adaba?
Ikwu na e keghị mmadụ eke dị ka ikwu na o nweghị onye rụrụ ụlọ a. Ọ dabaghị adaba
IHE ỤFỌDỤ NDỊ KWURU: Eluigwe na ụwa pụtara na mberede n’ihi otu nnukwu ihe gbawaranụ.
1. Ònye ma ọ bụ gịnị mere ka otu nnukwu ihe ahụ gbawaa?
2. Olee nke na-ada ka ihe mere eme? Ọ̀ bụ ikwu na ihe niile nọkatara pụta, ka ọ̀ bụ ikwu na e nwere onye kere ha?
IHE ỤFỌDỤ NDỊ KWURU: Ndị mmadụ si n’ụmụ anụmanụ pụta.
3. Ọ bụrụ na mmadụ si n’enwe ma ọ bụ n’anụmanụ ọzọ pụta, gịnị mere e ji nwee ezigbo ihe dị́ iche n’otú ụmụ mmadụ si eche echiche na otú enwe si eche echiche?
4. Gịnịzi mere ihe ndị dị́ ndụ ji dị́ oké mgbagwoju anya, ma ihe ndị yiri ka o nweghị ihe ha bụ?
IHE ỤFỌDỤ NDỊ KWURU: Ndị sayensị achọpụtala ihe gosiri na e keghị mmadụ eke.
5. Onye na-ekwu ihe a ò jirila aka ya chọpụta na e keghị mmadụ eke?
6. Ị̀ ma na ọtụtụ ndị kweere na e keghị mmadụ eke naanị n’ihi na a gwara ha na ndị niile ma ihe kweere na ya?
Otu nwa agbọgho aha ya bụ Julia sịrị: “Ọ bụrụ na ị na-aga n’ọhịa hụ ọmarịcha ụlọ, ị̀ ga-echewe, sị: ‘Ụlọ a amagbuola onwe ya. Ọ ga-abụrịrị na osisi ndị a dara, hazichaa onwe ha, ghọọ ụlọ a.’ Mbanụ. Ichewe otú ahụ adabaghị adaba. Gịnịzi mere anyị ga-eji kwere na ihe niile dị́ n’ụwa ji aka ha pụta?”
Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Gwen sịrị: “Ka e were ya na mmadụ gwara gị na n’ụlọ ọrụ na-ebi akwụkwọ, otu ebe a wụnyere ịnk gbawara, ịnk efesachaa ma n’ahụ́ ụlọ ma n’uko ụlọ, ghọọ nnukwu akwụkwọ ọkọwa okwu. Ị̀ ga-ekweta?”
GỊNỊ MERE Ị GA-EJI KWERE NA CHINEKE DỊ?
Baịbụl kwuru na i kwesịrị iji ‘ike iche echiche gị’ na-ekpebi ihe ị na-eme. (Ndị Rom 12:1) Ọ pụtara na i kwesịghị ikwere na Chineke dị naanị maka na ọ bụ
IHE OBI GỊ GWARA GỊ (Obi m na-agwa m na a ga-enwerịrị onye ike ya karịrị ike onye ọ bụla)
IHE NDỊ ỌZỌ KWEERE (M bi n’ebe ọtụtụ ndị kweere na Chineke dị)
IHE A KỤZIIRI GỊ (Papa m na mama m kụziiri m ka m kwere na Chineke dị. M̀ ga-emekwanụ gịnị?)
Kama ikwere n’ihi ihe ndị a, i kwesịrị ịmata ihe mere i ji kwere na Chineke dị.
Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Teresa sịrị: “Ọ na-abụ m nọrọ na klas na-ege onye nkụzi anyị ntị mgbe ọ na-akọwa otú ahụ́ anyị si arụ ọrụ, obi na-esi m ike na Chineke dị. Ihe ndị dị́ n’ahụ́ anyị nwere ihe ha na-arụ, ma nke kacha arụ obere ọrụ. Ọtụtụ mgbe, anyị anaghị ama mgbe ha na-arụ ọrụ ndị ahụ. N’eziokwu, otú ahụ́ mmadụ si arụ ọrụ dị ezigbo mgbagwoju anya.”
Otu nwa okorobịa aha ya bụ Richard sịrị: “M hụ ụlọ elu dị́ ezigbo elu, ụgbọ mmiri ma ọ bụ ụgbọala, m na-ajụ onwe m, sị: ‘Ònye rụrụ ihe a?’ Dị ka ihe atụ, ọ bụ amamihe ka e ji arụ ụgbọala, n’ihi na ọtụtụ obere ihe e ji rụọ ya kwesịrị ịna-arụ ọrụ nke ọma tupu ụgbọala arụwa ọrụ. Ebe ọ bụ mmadụ na-arụ ụgbọala ndị a, ọ pụtara na e nwere onye kere anyị.”
Otu nwa okorobịa aha ya bụ Anthony sịrị: “Ka m na-amụkwu gbasara sayensị, o sikwuuru m ike ikweta na e keghị ihe niile eke.” O kwukwara na o siri ike ikwere na e keghị mmadụ eke karịa ikwere na e nwere Onye kere ihe niile.
IHE Ị GA- ECHEBARA ECHICHE
N’agbanyeghị ọtụtụ afọ ndị ọkà mmụta sayensị jirila mee nchọnchọ, ha niile ekwekọrịtabeghị n’ihe ha na-ekwu na e keghị mmadụ eke. E weere na ndị ọkà mmụta sayensị bụ ndị ọkachamara. Ma ebe ọ bụ na ha ekwekọrịtaghị n’ihe ha na-ekwu, ọ̀ dị njọ ma gịnwa ghara ikwere na e keghị mmadụ eke?
Ka e were ya na nwa akwụkwọ ibe gị sịrị gị: “Ekweghị m na Chineke dị. Gịnwa ì kweere?” Dee ihe ị ga-agwa ya.
Lee vidio bụ́ Ihe Ndị Na-eto Ibe Gị Kwuru Gbasara Ikwere na Chineke dị́ na www.jw.org/ig. (Gaa n’ebe e dere IHE BAỊBỤL NA-AKỤZI, pịa ebe e dere > NDỊ NA-ETO ETO)
Ozizi Evolushọn na Ihe E Kere Eke Sayensị na Baịbụl
Olee Otú Baịbụl Kwuru Chineke Si Kee Ihe?
Baịbụl kwuru na Chineke ji ụbọchị isii kee ihe. Ụbọchị ndị ahụ hà bụ ụbọchị isii nkịtị?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ M̀ Kwesịrị Ikwere na E Keghị Mmadụ Eke?
Ụdị Dị Iche Iche Họrọ ụdị nke ị ga-ewere Azịza Ajụjụ Iri Ndị Na-eto Eto Na-ajụ
Nke a na-egere egere Họrọ ụdị nke ị ga-ewere Azịza Ajụjụ Iri Ndị Na-eto Eto Na-ajụ
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Azịza Ajụjụ Iri Ndị Na-eto Eto Na-ajụ
Ihe Ndị Mere M Ji Kwere na Chineke Dị